Phakathi izivakashi Tver ngamabomu uyawuthanda ukuthandwa eliphezulu kakhulu: lapha njalo guest uzothola edolobheni ukuthi kuyoba mnandi, ezifundisayo futhi ngeke zikhunjulwe isikhathi eside. Futhi Tver liyindawo enkulu lapho ungakwazi ukujabulela amaningi ubuhle bemvelo Russian: amahlathi ezixakayo kuyo, emifuleni kusukela komkhulu kusiya komncinyane, amachibi amahle. Kodwa njengoba akuzona zonke isihambi ufuna abahlala kude impucuko, abaningi ozama ukubhuka kusengaphambili bona nabangane babo, uma ikhona, igumbi.
Indlela ukukhetha ehhotela?
Kukhethwa ehhotela - yimbi ngempela, ngoba lapha kubalulekile ukuba acabangele ezinye izici ezikhethekile. Kukhethwa kuthinta ngokuyinhloko ngenjongo ukufika emzini. Uma uhlela ukuvakashela ezikhangayo, ngokuvamile ekhethwe labo amahhotela e Tver, okuyinto etholakala eduze izinto ezithakazelisayo. Lokhu kuyokwenza ugcine kakhulu isikhathi sakho on uhambo ezikhangayo oyifunayo. Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo intengo futhi induduzo ihhotela, njengoba izinkinga ngisho encane nsuku zonke futhi ezingabizi kakhulu konakalisa umbono okunye.
Tver amahhotela abasakwazi ezihlukahlukene futhi asiduduze, nokubaluleka. Lokhu kuvumela wonke umuntu ukukhetha ngempumelelo kakhulu kuye ukukhetha yokuhlala ukuze ivumelane zonke izidingo.
Yini ukunikela izivakashi of Tver? Amahhotela, abekwe ngezansi, kukhona phakathi ethandwa kakhulu phakathi izivakashi izikole idolobha:
Ihhotela Guest House - Indlu lena yokudlela entsha, wavula izinyanga eziyisithupha nje edlule. Izindlu zinA yonke ukunambitheka kanye isabelomali, kusukela esigabeni wenduduzo kubantu Umnotho isigaba. Zonke amakamelo, kungakhathaliseki ezingeni wenduduzo futhi ahlotshiswe isitayela minimalist. Amakamelo ethokomele isici nempahla yesimanje, igumbi ngalinye has a yokugezela yangasese. imigomo Ukubhuka nemibandela batjhuguluka lula: ungaphila okungenani amahora ambalwa, okungenani ngosuku.
Inxanxathela "Seliger" itholakala eduze lendawo umlando Museum, yobuciko, umphakathi Philharmonic yeshashalazi, amabhizinisi amaningi amakhulu, kanye nezinye izikhungo ezifanayo. Ngakho-ke, kuyinto ekahle kokubili balabo abeze ukuxazulula izinkinga ebhizinisini, futhi izivakashi noma izihambi. Amagumbi - uhlobo esiphakeme futhi ejwayelekile olulodwa futhi double. Kukhona indlu enamakamelo amabili suite nezindawo zokuhlala.
"Crystal Palace". Itholakala kude kusukela maphakathi, kodwa eduze isonto lika-Alexander saseNevsky, iChurch of Our Lady, South Park, w / d esiteshini, Babaevskie Grove, izitolo eziningi ezahlukene, amathilomu. Ngenxa ezokuthutha zomphakathi ungafinyelela kuphi emzini noma ukuthola isikhungo. Esikhathini konke ehhotela kwenziwa ukuqinisekisa ukuthi zonke isivakashi ungaba ukuphumula okuhle. Ukudla kwasekuseni kungajatshulelwa egumbini lakho noma uvakashele yokudlela, lapho abasebenzi abaqeqeshiwe ungenza ukudla kwanoma iyiphi yinkimbinkimbi.
Noma kunjalo, isidingo enkulu ngempatho izikhungo, esisogwini loMfula iVolga. Phakathi kwazo kunane-Ihhotela "Tver Park Hotel."
Ihhotela "Ipaki" (Tver) sinendawo elula kakhulu - ke yakhelwe omuzi, esinengekayo birch eMoscow w, №14 .. Lokhu kuvumela izivakashi ukuze sijabulele ukuthula nobuhle, esithekile kwelinye izindawo ehlane. Kodwa, uma ufuna ukuza emuva jolly ukuphila edolobheni, ungakwazi ukuya enkabeni yedolobha, lapho ngokufudumele ukuvula iminyango nemishayo, ema-disco nezindawo zokubukela amabhayisikobho.
Ihhotela elakhiwa ngo-1964 - ke lamiswao ukufika Fidel Castro, ngakho wonke umuntu isakhiwo kwenziwe ezingeni eliphezulu kakhulu ukunikeza umbono elifanele kwasekhasini umholi-Cuban. Esikhathini esingaphezudlwana 10 edlule uye ayedlule umsebenzi wokuvuselela izakhiwo eziyinkimbinkimbi. Ngenxa yalokhu abagqugquzeli bakwazile ukuhlanganisa kahle ubuchwepheshe besimanje ukuze bangenise nobuhle acwebile yemvelo ezizungezile.
Ihhotela incane, kukhona amakamelo 50 kuphela, ezinye zazo ziyizilimi amakamelo emndenini, i-suite, non-ukubhema, abahambi olulodwa. Izinga enduduzo inikezwa yihhotela "Ipaki" (Tver) - kusukela okunethezeka ikamelo ejwayelekile nge iqoqo zonke adingekayo ukuze iholidi izinga.
Kwelinye igumbi ngalinye, ngaphezu TV, ucingo, mini-bar, ibhokisi idiphozi ukuphepha. Esikhathini yokugezela - zokugeza, dryer izinwele, amathawula. Kanyekanye abantu abangaphezu kuka-80 kungaba ehhotela. abathandi yezilwane bathi sikhungo bangaphila nomngani wabo abane-ezinemilenze.
Isakhiwo ehhotela "Tver Park Hotel" - indawo ephelele ubambe izingqungquthela, ukuqeqeshwa sessions, imihlangano zasemsebenzini: kuphathelene ihholo inkomfa ngamathuluzi multimedia, umsindo ukuqinisa izinhlelo, ifeksi, engenantambo-Wi-Fi Inthanethi. Ungasebenzisa amasevisi yobubhalane uma kudingeka.
Futhi, umshado uye isitoreji umthwalo, ikamelo ilondolo, indawo lapho kuthanda amasevisi nezinsiza shoeshine, valet. Reception abasebenza ubusuku nemini ukuze ukwazi axazulule ikamelo elibhukiwe nganoma yisiphi isikhathi. Labo abeze ku izimoto zabo ungakwazi park izimoto kule kuqashelwe yokupaka khulula. Izivakashi eziningi ukuthi inzuzo.
Ngaphandle kokuhlala ukhululekile futhi abasebenzi friendly lapha anikele ezihlukahlukene ezihehayo ukuthi izivakashi ukujabulela. Kusukela ehhotela isendaweni osebeni iVolga, endaweni yokuqala imisebenzi amanzi. izinkampani Sexy ezinomsindo eningase nikhethe cruise imibhangqwana zanoma iyiphi iminyaka ngeke akhulume nalowo muntu athi izizinda yothando yezikebhe noma izikebhe. Futhi uma ufuna ukujabulela edolobheni futhi ubuhle loMfula iVolga esekuphakameni, abahambi ehhotela "Ipaki" (Tver) inikeza ithuba ukuthatha uhambo ngendiza enophephela emhlane.
Coma, lezi zivakashi ungadlala:
sauna ukuvakashelwa uyoba ukuphela ephelele usuku olunjalo umatasa, kuyoba uyakwazi ukubeka umoya phansi imisipha ukhathele. Kodwa labo uthanda ukusheshe sivuke futhi ujabulele ubuhle kwelanga, bukela njengoba imisebe yokuqala ukumpotopotoza umhlaba, ungakwazi ukuhamba ekuseni. Futhi hhayi ngakho nje, futhi ihlelwe ukudoba uhambo. IVolga endulo eyaziwa ocebile ngokwehla kwesibalo sezinhlanzi, ngakho akekho kwesokunxele ngaphandle nibambe. Hhayi esilitshelwe futhi abathandi ukuzingela - nabo kuningi okuhle onakho.
On umbuzo ukudla ehhotela aphathwe njengento ebaluleke kakhulu. Ngakho, ibhulakufesi kungenziwa ngakhonza ekamelweni lakho noma udle kubha. Amakhasimende bathi kulula kakhulu. Akhiwe ehhotela "Tver Park Hotel» yokudlela balindelwe izivakashi 13,00 ligijime kube phakathi kwamabili. Upheka izigaba ephakeme ukhonza zokupheka European futhi Russian. Cosy izindawo emkhathini, ukudla okumnandi, umculo bukhoma izinhlelo ezithakazelisayo ekhonsathini, njalo indaba ephathwayo amaqembu - ihloselwe ukwenza uhlale lula futhi kujabulise.
Yokudlela "Birch Grove" (Tver), awukwazi kuphela adle, kodwa futhi ukugubha Kunoma ikuphi, kusukela ngosuku lokuzalwa nesiphetho kusihlwa yenkampani. Okwemicimbi ekhethekile isikhungo yakhiwa amamenyu akhethekile ehloniphekile uhlu iwayini.
Kulabo abafuna ukuchitha i kusihlwa ujule ukuvula ngokukhethekile ifakwe pergola nge izoso. Indlela ukubhala ukubuyekeza, kulabo ababengabafo abangamaqhawe, lucky ngokwanele ukuba adle kwesinye salezi emadokodweni, bayizithunywa kakhulu edolobhaneni. Uma isivakashi amaqabunga ubunjalo, ngokudoba, ukuzingela lapho inganikeza kwasemini phama.
Ihhotela "Ipaki" (Tver) zikhethwa hhayi kuphela abantu abadala, kodwa futhi imindeni enezingane. Lokhu lula isimo esihle emvelweni futhi ukutholakala wonke lamakhono abalulekile ukuze nokuhlala ezithakazelisayo futhi kuphumelele asemasha:
Izikhangibavakashi nge abadala osebeni olunothile of the iVolga.
Ethakazelisayo uhamba edolobheni lasendulo.
Buka ukusebenza e yaseshashalazini zezingane.
Isidlo sasemini e cafe yezingane.
Ukuvakashela amapaki ezokuzijabulisa.
imidlalo Outdoor esinengekayo birch lapho ihhotela itholakala.
Imidlalo ku lokudlala.
Lezi kanye nezinye ukuzijabulisa eziningi izokwethulwa izinkumbulo emangalisayo hhayi kuphela, kodwa futhi ukuqinisekisa ubuthongo obumnandi futhi iphango enempilo. Bored ukuchitha isikhathi ukusiza okuthakazelisayo etafuleni imidlalo futhi ezihlukahlukene iziteshi satellite, kuhlanganise nezingane.
Thola Tver kungaba yisiphi zezithuthi - amabhasi, isitimela, izimoto zabo. Njengoba ibanga kusuka eMoscow ingenkulu kakhulu - ngaphansi kuka-180 km, lo mgwaqo uba esiningi cha. Labo uthole ezokuthutha zabo, uzokwazi ukuthola eziyinkimbinkimbi ehhotela "Tver" ngaphandle kobunzima: kuba emaphethelweni umuzi ingxenye dolobha. Uma endleleni ukuba sinqotshwe noma ibhasi, ungakwazi ukufinyelela esiteshini sesitimela ngesikhathi esincane kakhulu isikhathi futhi, okubaluleke kakhulu, ngenkokhelo nesizotha.
I-Guest Guest ithi mayelana nehhotela Eazy Resort Kata Beach 3 * (izithombe)
Ihhotela Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 * eTurkey izithombe kanye nokubuyekeza
Amahhotela e Saratov: izithombe, incazelo, ukubuyekezwa, intengo
Motorcycle "Ural": ukusebenza, ukukhiqizwa, ukusebenza
Le noveli "Usuku Lihlala Kungaphezu Eminyakeni Eyikhulu" - isifinyezo nokuhlaziya
Tulips onsomi - ukuthini lokho? Bamphathele violet Tulips njengesifanekiselo ukuthembeka
Umhlaba kuyona Anapa - Russia noma Ukraine?
Izidakamizwa "Flyuditek": yokusetshenziswa
Kanjani ukwakha ABS aphansi ekhaya: uprzhneniya elula
Indlela Ukusheshisa: imithetho eyisisekelo yokuHlawula
"Okugeza Russian" (Cheboksary) - indawo ukuze bathole ukuphumula yokutakula